Mpitsara 3 - Ny Baiboly
Mpitsara toko 3
Ny firenena tafajanona tao Kanaana hizahan-toetra an'Israely - Otoniela mpitsara miaro an'Israely amin'i Kozana-Rasataima - Aoda mpitsara miaro an'Israely amin'i Eglona.
1Ireto no firenena navelan'ny Tompo handry fehizay hoetni-mizaha toetra an'Israely, dia izay rehetra tsy nahita ny ady rehetra tany Kanaana. 2Ary hany nokendreny tamin'izany dia fampianarana ny taranak'Israely sy fampahaizana hiady, dia ho an'izay tsy mbola nahalala izany taloha ahay. 3Ny andriana dimy tamin'ny Filistina, ny Kananeana sy ny Sidoniana ary ny Heveana rehetra izay nonina tamin'ny tendrombohitra Libàna, hatramin'ny tendrombohitra Baala-Hermona, ka hatramin'ny vava lalan'i Hamata. 4Ireo no nokendrena hizahan-toetra an'Israely mba hahitàna na hitandrina ny didy izay nandidian'ny Tompo ny razany tamin'ny alàlan'i Moizy izy ireo na tsia. 5Ary ny zanak'Israely dia nonina tao afovoan'ny Kananeana, ny Heteana, ny Amoreana, ny Ferezeana, ny Heveana, ary ny Jeboseana. 6Ny zanaka vavin'ireo nalainy ho vady, ny zanany vavy nomeny ho vadin'ny zanaka lahin'ireo; ary ny andriamanitr'ireo no notompoiny.
7Nanao izay ratsy teo imason'ny Tompo ny zanak'Israely: Iaveh nohadinoiny, fa Baala sy ny Askerota no notompoiny, 8ka nirehitra tamin'Israely ny fahatezeran'ny Tompo; namidiny ho eo an-tànan'i Kozana-Rasataima mpanjakan'i Mesopotamia izy, dia nanompo an'i Kozana-Rasataima valo taona ny zanak'Israely. 9Fa nitaraina tamin'ny Tompo ny zanak'Israely ka nananganana'Iaveh mpanafaka izay namonjy azy izy, dia Otoniela zanak'i Keneza, zandrin'i Kaleba. 10Nilatsaka tamin'io ny Fanahin'ny Tompo, ka nitsara an'Israely izy, ary nivoaka hiady; ary natolotry ny Tompo ho eo an-tànany Kozana-Rasataima mpanjakan'i Mesopotamia, ka nahery tamin'i Kozana-Rasataima ny tànany. 11Dia nandry efapolo taona ny tany, ary maty Otoniela zanak'i Keneza.
12Fa nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo indray ny zanak'Israely, ka noho izy nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo dia nampaherezin'ny Tompo tamin'Israely, Eglona mpanjakan'i Moaba. 13Nikambana tamin'ny taranak'i Amona sy Amaleka, Eglona, dia niainga nandeha. Nandresy an'Israely izy ka nahafaka ny tanànan-drofia. 14Dia nanompo an'i Eglona mpanjakan'i Moaba, valo ambin'ny folo taona, ny zanak'Israely.
15Fa nitaraina tamin'ny Tompo ny zanak'Israely, ka nananganana'Iaveh mpanafaka, dia Aoda, zanak'i Gerà, Benjamita, izay tsy nampiasa ny tànany an-kavanana. Nampitondrain'ny zanak'Israely fanomezana ho an'i Eglona mpanjakan'i Moaba izy. 16Nanao sabatra roa lela Aoda, hakoho no halavany, nafehiny anatin'ny akanjony tamin'ny valahany havanana. 17Natolony an'i Eglona mpanjakan'i Moaba ny fanomezana, ary lehilahy matavy be Eglona. 18Nony vitany ny fanolorana ny fanomezana dia nalefany ny olona nitondra ny fanomezana; 19fa izy kosa dia niverina, avy hatreo amin'ilay sampy vato akaikin'i Galgalà ka nanao hoe: Ry mpanjaka ô, misy zavatra tsy ambara telo holazaiko aminao. Ka hoy ny mpanjaka: Mangina! Dia nivoaka avokoa izay olona rehetra teo aminy. 20Nipetraka irery tao an-tranony fakana hatsiatsiaka izy no nohatonin'i Aoda ka nataony hoe: Manana teny avy amin'Andriamanitra ho anao aho. Tafatsangana niala tamin'ny fiketrahany Eglona. 21Dia naninjitra ny tànany havia Aoda tamin'izay, nanatsoaka ny sabatra teny am-balahany havanana, ary notrabarany tamin'io ny kibony; 22ka ny lelan-tsabatra dia difotra mba-jarany ary nikatona teo ambonin'ny lelan-tsabatra ny taviny fa tsy notsoahiny tamin'ny kibony ny sabatra ary tafagorobaka hatrany an-damosiny. 23Ny tohatra any ivelany no nivoahan'i Aoda, ary ny varavaram-ben'ny trano ambony nohidiany tamin'ny karetsaka. 24Rahefa tafavoaka izy dia tonga ny mpanompon'ny mpanjaka dia nizaha izy ka indro fa ny varavaram-ben'ny trano ambony dia voahidy karetsaka, ka hoy izy: Tsy maintsy misaron-tongotra ato an-trano fakana hatsiatsiaka izy. 25Dia niandry ela teo izy ireo ka efa menatra aza, ary nony tsy novohany ny varavaran'ny trano ambony dia nalain'izy ireo ny fanalahidy ka novohany; ary indro fa maty niampatra tamin'ny tany teo ny tompony. 26Dieny mbola niatoato teo izy ireo dia efa lasa nitsoaka Aoda, sy tafahoatra ny sampy vato ary nandositra tany Seirata. 27Vao tonga izy dia notsofiny ny trompetra tany amin'ny tendrombohitr'i Efraima. Nidina avy any amin'ny tendrombohitra niaraka taminy, ny zanak'Israely, ary izy no nitarika azy ireo. 28Hoy izy taminy: Manaraha ahy, fa efa natolotry ny Tompo eo an-tànanareo ny fahavalonareo, ny Moabita. Dia nidina nanaraka azy ireo, ka azony ny fitana an'i Jordany tandrifin'i Moaba, ary notapahiny tsy hitan'olona na dia iray aza. 29Nandresy an'i Moaba izy ireo tamin'izany andro izany, tokony ho lehilahy iray alina, samy tomady sy mahery avokoa, ka tsy afa-nandositra na dia iray aza. 30Dia voaetry eo ambanin'ny tànan'Israely Moaba tamin'izany andro izany ka nandry valopolo taona ny tany.
31Samigara zanak'i Anata no nanarakaraka azy. Nandresy Filistina enin-jato lahy, tamin'ny fanindronan'omby izy, ka mpanafaka an'Israely koa. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0749 seconds